Ithisisi yokuqala yesidanga sobugqirhalwazi ngolwimi lwesiXhosa: udliwano-ndlebe noGqr Nompumelelo Kapa | LitNet
Ithisisi yokuqala yesidanga sobugqirhalwazi ngolwimi lwesiXhosa: udliwano-ndlebe noGqr Nompumelelo Kapa
Hlezi Kunju, Nompumelelo Kapa Onderhoude 2018-11-08
UGqr Nompumelelo Kapa wenze imbali ngokuba ngumfundi wokuqala ezimbalini kwiYunivesithi yaseFort Hare ukubhala ithisisi yesidanga sobugqirhalwazi ngolwimi lwesiXhosa.
UGqr Hleze Kunju uncokola noGqr Nompumelelo Kapa:
Huntshu! Huntshu Gqr Kapa, asivuyisani nawe koko sivuya nawe kuba le mbali awuzenzelanga; wenzele nathi. Singachithanga xesha, ngubani waphi uGqr Kapa?
Ndizalelwe eTora kwidolophu yaseNgcobo, eMpuma Kapa. Ndingumntwana wokugqibela ozalwa ngumama ongatshatanga, uNobantu Kapa noye waligorhakazi ekusikhuliseni asibonise ukubaluleka kwemfundo. Ndikhuliswe ngumakhulu uMaRhadebe notatomkhulu ababeye ngobufundisi kwilali yaseTora, iingcambu ziseHewu eHekeni. Ndikhule ndingumntwana okuthandayo ukubhala, ingakumbi ‘amaculo aseAfrika.’ Ndandiye ndikhuphela lonke iculo ndilibhale ngokutsha kuba ndisonwabela nje ukubhala.
Eyona nto iphambili kuthi kukuba ubhale ngesiXhosa, eyokuba ubhale ngantoni asiyinanzi kakhulu. Sibalisele ngolu phandolwazi lwenze imbali.
Olu phandolwazi luphononongo oluphicotha ifuthe lwentlalo, inkcubeko, noburharha kuthiyo lwabalinganiswa kwiidrama zesiXhosa. Luphonononga nzulu imigaqo ethile elandelwa ngababhali besiXhosa xa bathiya abalinganiswa, nokubaluleka kwendima edlalwa ligama elo.
Yintoni le ikuchukumisileyo nebangele ukuba uchonge esi sihloko?
Emva kokufunda ezi drama zesiXhosa, ndibona nendlela ekuthiywe ngayo, ndibe nomdla kakhulu ekuphandeni imbali ngokuthiywa kwegama, ndifuna kananjalo ukujonga ukuba intsingiselo yegama inayo na indima eyidlalayo kubomi babalinganiswa nakubomi babantu bokwenyani. Okunye okubalulekileyo, yinjongo yokuthiywa kwegama. Olu phando luyabonisa ukuba ezo njongo ziphenjelelwa yiminqweno ethile, lukwajonga ukuba loo minqweno iyafezekiseka na. Kananjalo, uphando lujolise ekwenzeni igalelo eluntwini nokuvusa igugu neqhayiya ngokuthi lubonise ukubaluleka kwegama nendima elithi liyidlale ebomini bomntu.
Umsebenzi wam njengotitshalakazi nawo ube negalelo. Ndisoloko ndihleli nabantwana abanamagama ahlukeneyo, lo mba wothiyo ndiwuphawule ke nakubo. Kwiincwadi zedrama, abalinganiswa sithi sibazi izimilo, iintetho, kunye neentshukumo zabo ngokubabiza ngamagama. Ukanti nakubafundi bam endibafundisayo oku kuyabonakala kuninzi lwabo. Kuloko ndiye ndanomdla wokuba ndazi ukuba uthiywa njani umlinganiswa kuncwadi ukuze igama lakhe lingqinelane noko akudlalayo ebalini. Ndingathi obona buncwane kolu phando, kukuba ndilwenze ngokuthi ndithelekise uthiyo ngqo ekuhlaleni ndijonge imiba elandelwayo xa kuthiywa igama ndithelekisa ke nendlela elandelwa ngababhali.
Uphandolwazi olukumila kunje lwayama kakhulu kwiithiyori ngeethiyori. Ungathi gqaba-gqaba nje nokuba yithoyori inye kozisebenzisileyo?
Ngokuqinisekileyo bendingenakungayisebenzisi enye yeethiyori zothiyo, i-Onomastiki, ndichankcathe kuyo ekwenzeni olu phando. Ukugqabaza kulwazi endilufumeneyo ndingabalula ukuthiya ngeziganeko, ukuvakalisa imizwa, iminqweno yabazali, ukuthiya kulandelwa ubuKrestu, amagama eza ngephupha, ukuthiya ngeziduko, njalo njalo.
Luthini uluvo lwakho malunga nokusetyenziswa kweelwimi zesiNtu kumaziko emfundo enomsila?
Umsebenzi weeYunivesithi unganobunzima ngenxa yokuthintelwa lulwimi lwasemzini, isiNgesi ke ukutsho. Ukanti iYunivesithi inokuqesha abancedisi abaza kuthi bahlangabezane nabahlohli ngokuthi bancedise abafundi bebacacisela izifundo ngolwimi lwabo lweenkobe, ulwimi abaluvayo. Ukufumana ulwazi ngolwimi lwakho lweenkobe kwenza ukuba uyibambe uyigcine ngakumbi into oyifundayo naxa sele uyifumana ngolwimi lwasemzini. Olu phando luza kuphakamisa ulwimi lwesiXhosa, nanjengokuba uMgaqo-siseko ukhuthaza, kuzanywa ukuphuculwa nokunyusa isiXhosa sibe kumgangatho olinganayo nesiNgesi nesiAfrikaans.
Ungagqabaza ngemingeni odibene nayo lo gama uqhuba olu phando?
Hayi Gqr, akukhange kube lula. Uyawuqonda ke nawe umcimbi wokusokolisa kwesigama sesiXhosa kodwa iYunivesithi le incedisile kakhulu kuba kukho iziko lobhalo lwezichazi-magama kwakunye neziko lolwimi (Language Unit) elithe lancedisa kakhulu ekucebiseni ngesigama esifanelekileyo.
Uziva njani ke ngeli galelo lihle kangaka ulenzileyo?
Ndiziva ndichulamancile, ndiyazingca ngokuthi ndenze imbali kule Yunivesithi. Kuhle ukuba silandele ekhondweni njengokuba inkululeko sayilwelwa ngamagorha namagorhakazi amanye asele alishiyayo eli. Ithi ke loo nto nathi masingayeki isizwe sitshabalale. Ubuntu buphelile kwaXhosa ngenxa yokutshabalala kolwimi nenkcubeko yethu. Luvuyo olukhulu ukubonakala njengomnye wabavuseleli bolwimi lwesiNtu, njengoko ezinye iiYunivesithi sele zenzile, ndingabalula iYunivesithi iRhodes.
Siyabulela kakhulu Gqirhalwazi ngexesha lakho, ungakhuthaza uthini ngakumbi kwabanomdla wokuzeka mzekweni? Ungaqoshelisa ngezicwangciso onazo ukuya phambili.
Maxa-wambi abafundi nababhali besiXhosa bajongelwa phantsi ngenxa yokungaxatyiswa kolu lwimi. Uluntu luthetha izinto ezingakuxhela umphefumlo kumakhasi onxibelelwano ngenxa yokubhala ngesiXhosa, oko kudalwa lulwazi olungekhoyo kuluntu. Kungoko sizimisele ukuqina #asijiki, sijonge phambili ekuphuculeni ulwimi lwesiXhosa ukuze nabalandelayo bangabinadyudyu.
Njengoko olu phando luvule amehlo lwavuselela abaninzi, iinjongo zam kukuqhubela phambili, ngokuphuhlisa iinkqubo zemfundo kunye neeprojekti ezikhuthaza ukusetyenziswa kolwimi lweenkobe.
Ikwangumnqweno wam ukunyusa nokukhuthaza ukusetyenziswa kolwimi kwezoqoqosho, ukuze isizwe singatshabalali. Kwiiyunivesithi ezikhoyo apha ephondweni ndinqwenela ukuba ndibe yinxalenye yokwenza ulwimi lwesiXhosa lufakwe kwikharityhulam kwezempilo, nakwezomthetho. IYunivesithi yaseKapa sele ikwenzile oku. Nalapha ePhondweni kubalulekile ukusetyenziswa kolwimi lwesiXhosa nakumanye amaSebe anje ngala sele ndiwakhankanyile. Oku kuya kunceda ukuba noogqirha bakwazi ukucacisa izigulo zabantu nendlela abaza kuzinyanga ngazo, kuquka oogqirha bamaNdiya, abamhlophe nabanye abaza kuphuma basebenze kwizibhedlela zamaXhosa kweli leMpuma Kapa. Ngaloo mazwi, ndithi phambili ngolwimi lwethu lweenkobe, phambili, #asijiki.
Ngxatsho ke Gqirhalwazi, #asijiki ngenene. Siyazingca ngawe singumzi wakwaXhosa. Sithi nangamso!
JC (Koos) Oosthuysen
2018-11-08 at 20:51
Ngxatsho, Gqirhalwazi! Phil' ud' ukhokhobe!
Kusezandleni zethu, thina esisixabisileyo isiXhosa, ukuthi siya kutshona, kusuke kuthethwe ulwimi lwasemzini, okanye isiXhosa siphuhliswe, sibe nako ukusetyenziswa nakwiindidi eziphakamileyo zemfundo nokuba ziziphi na.